Fety asabotsy tolakandro: hamaly ny fangatahan’ny mpankafy ny Iraimbilanja | NewsMada
Fety asabotsy tolakandro: hamaly ny fangatahan’ny mpankafy ny Iraimbilanja
Maro ireo mpanaraka ny « cabaret » fanaon’ny tarika Iraimbilanja satria tsy matetika aza izany. Mbola maro koa anefa ireo mpankafy mangetaheta ireny fiarahana ireny kanefa tsy afa-manoatra noho izy fety amin’ny alina. Ho voavaly kosa ny fangatahana amin’ity satria fantatra fa hanohy ny fety asabotsy tolakandro, etsy amin’ny Trass Tsiadana ny 7 desambra izao, ry Batata sy ny tariny.
Hanomboka amin’ny 4 ora ny fiarahana ka miankina amin’ny hafanana avy amin’ny mpankafy sy ny eny an-tsehatra ny fiafaran’izany. Mitovy amin’ny fanao rehefa « cabaret » zoma ihany, izany hoe, hanao ny sanganasany ary handalo amin’ireo hira nankafiziny ihany koa ny tarika Iraimbilanja amin’io.
Tsiahivina fa ho fitsinjovana ihany koa ireo tsy afaka mivoaka alina, noho ny antony maro, ny nanaovan’ny Trass Tsiadana ity endrim-pialamboly iray ity. Nanomboka izany tao amin’ity toerana ity ry Arison Vonjy, i Ony sy Tolotra ary izao tohizan’ny Iraimbilanja izao.